Lix Amar Oo Waajibka Ah Inta Aanu Bixin Kaarka Ganacsi | Abuurista khadka tooska ah
Badanaa waxaan isku aragnaa xaalad aan caadi aheyn oo ay tahay inaan haysano kaarkeena ganacsiga. Waqtigaas waxaan heleynaa qof muhiim noo ah. Isla waqtigaas waxaad wadahadal la bilaabeysaa qofkaas oo aad uga tagtaa lambarkaaga ama emaylka ay ku xardhan tahay xusuustooda. Sidaa darteed, daqiiqadda ugu yar ee la filayo, galabnimada Axadda, dhageysiga moobilka iyadoo la ogyahay inuu isagu yahay. Marka si xaaladan aysan u ahayn dariiqa kale, waa inaan ogaanno lix amar oo khasab ah inaan ku geyno kaarkaaga.
Tobankan amar waxay faa'iido u yeelan doonaan soo jiidashada dareenka. Maskaxda ku hay, haddii aad kaar ku siiso goro maro ah, ma noqon doontid tirada nimcada leh. Ku soo bandhigida kaarka ganacsiga xaalad aad u fiican ayaa muhiim ah. Sidaa darteed, ka qaybgal kuwan talooyin yar.
1 Ha ururin xog fadlan
2 Ha noqon mid bulsheed
3 Ka taxaddar kaararkaaga
4 Ha isku qaabin qof walba
5 Xooji sumaddaada
6 Qaab qorista iyo akhrinta, halganka aan dhammaadka lahayn
7 Waxaad noqon doontaa asalka
Ha ururin xog fadlan
Waa wax aad u duufsan in la sameeyo naqshad iyo, xitaa markaan arko inay dhammaatay, waxaan dooneynaa inaan ka sii wanaajino wax badan. Tani waa markaan khalad sameyno galida xog fara badan. Magaca, astaanta, lambarka, emaylka, iwm iwm iwm. Mana jirto xitaa qol lagu arko naqshadda kaarka.
Raadi soo koobid ku habboon naftaada ama shirkaddaada. Samee hal ama labo xarig oo isgaarsiineed ugu badnaan. Oo qor magacaaga shakhsiga ah ama, meeshii ku habboon, astaanta.
Xusuusnow, haddii qof haysto kaarkaaga ganacsiga, waxay u badan tahay inuu kula kulmay oo uu horeba u ogaa waxa ku saabsan. Kaadhku wuxuu si fudud ugu adeegaa xusuusin ahaan. Marka si fudud u dhig - waxaad dooneysaa inaad ku boodboodo xusuustooda oo aad ku hagaajiso websaydhkaaga, ama meel ay ka heli karaan macluumaad dheeraad ah.
Ha noqon mid bulsheed
Haddii aad shaqo raadineyso iyo haddii aad shirkad tahayba, astaantaada gaarka ah cidna xiiso uma haysa. Haddii aad raadineyso xiriir, isticmaal shabakadaha kale ee bulshada sida Linkedin. Shirkadaha kale iyo macaamiisha labaduba ma xiiseeyaan waxa aad ku quraacatid. Midkoodna fikirkaagu ma aha mowduuc kale. Tan waxaad ku xiri kartaa albaabada. Xusuusnow in jaleecada hore ay aad muhiim u tahay, isu muuji inaad tahay baahi, ee ha u noqonin cadow.
Ka taxaddar kaararkaaga
Ma jiraan wax ka liita macmiilka ama shaqaaleeyaha mustaqbalka ee helitaanka kaarka ganacsiga duuduubmay oo ku wasakheeyey inaad ku haysatay salka jeebkaaga muddo bilo ah. Marka ku hay sanduuqa lagu geeyay. Si aad ugu qaadatid boorsada jeebka, ka fiican jeebka furan ama jeebka toosan ee jaakada. Uguyaraan intaad baxdo, intaad guriga joogto, ku hayso meel bannaan.
Ha isku qaabin qof walba
Sida manhajka waxbarashada, shirkadaha aad la kulanto oo dhan isku mid kaaama doonayaan. Waxay raadin doonaan shuruudo kala duwan markay shaqaaleysiinayaan qof ama la ganacsanayaan shirkaddaada. Kaararka ganacsiga ee nashqadeeyayaasha nooca ah waa inaysan u ekaanin kaararka ganacsiga ee naqshadayaasha UX, tusaale ahaan. Sidoo kale dadka doonaya inay galaan shirkad sharciyeed ma ahan aqoon isweydaarsi nijaar.
Isku day inaad sameysid astaantaada ama astaanta kaliya sawirkaaga kaarka ganacsiga. Haddii aad daabacdo laba dhinac (oo ay tahay inaad sameyso), haddii kale waa inaad ku dartaa faahfaahinta xiriirkaaga.
Waxaad la mid tahay astaantaada oo macaamiishaada ama asxaabtaadu waxay u baahan yihiin inay isla markiiba la midoobaan. Marka ha ka leexan midabadaada astaanta ah sinnaba; waa uun wareer.
Qaab qorista iyo akhrinta, halganka aan dhammaadka lahayn
Ilaa aad adigu tahay tilmaam sameeye, ma jirto sabab loo adeegsado font script kaarkaaga ganacsiga. Waxay u muuqan kartaa wax qurxoon, laakiin haddii aadan ku fahmi karin jalleecsi, kaliya waad diidday barta kaarkaaga.
Marka la soo koobo, kaliya hubi in magacaaga iyo faahfaahinta xiriirkaaga si cad loo soo bandhigay. Hadana qoraalkaaga guud ka sarree 8pt.
Waxaad noqon doontaa asalka
Tani waxaa laga yaabaa inay tahay amarka ugu muhiimsan ee dhammaan: "ma dili doontid" naqshadeynta kaararka ganacsiga. Wax kasta oo aad go'aansato inaad ku sameyso naqshadeyntaada, ka samee naftaada naftaada. Ka dhig mid asal ah oo xusuus leh ka dhig. Hadday ahaan laheyd farriintaada gaarka ah, qaabeynta fikirkaaga, ama dhimista sirta ah, u oggolow macaamiishaada inay xusuusnaadaan oo hubi in kaarkaaga aan lagu tuurin salka boorsada si dib loogu warshadeeyo lix bilood ka dib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Lix amarro qasab ah kahor dhiibida kaarka ganacsiga
Xulashada 10 mawduucyada WordPress ee jawaabta bilaashka ah